नेपालमा एकैदिन २ सय ८८ जनामा देखियो कोरोना, कहाँ कति ? हेर्नुहोस् - ejhajhalko.com
नेपालमा एकैदिन २ सय ८८ जनामा देखियो कोरोना, कहाँ कति ? हेर्नुहोस्
नेपालमा संक्रमितको संख्या २०९९ पुग्यो
झझल्को सम्वाददाता २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १९:१३ 480 पटक हेरिएको
२० जेठ,काठमाडौं ।
नेपालमा थप २८८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कूल कोरोना संक्रमतिको संख्या २०९९ पुगेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले अनुसार धुलिखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा ३८, पोखरामा भएको परीक्षणमा १० र धरानमा भएको परीक्षणमा १ जनाको पोजेटिभ देखिएको छ ।